Boorsada dahaaran ee gaarka ah ee gaarsiinta raashinka Mootada boorsada kuleylka ee gaarsiinta
Nooca Qaabka: Custom
Midabka: Jaalle ama caado
Logo: Daabacaadda Shaashadda Xariirta
Isticmaalka: Cuntada Cusub
Xiritaanka: Xiritaanka jiinyeer
Magaca badeecada: boorsada kuleylka
Magaca sheyga: boorsada dahaarka leh
Ereyga muhiimka ah: boorsada bacda qabow/boorsada gaarsiinta dahaaran
Cabbirka hal xirmo: 50 × 50 × 7 cm
Miisaanka guud oo dhan: 2.600 kg
(1) 1pcs/1 polybag, 5 kumbiyuutar ayaa lagu ridayaa kartoon
Tirada (Bacaha) 1 - 100 101 - 500 501 - 2000 > 2000
Qiyaasta Waqtiga (maalmo) 15 25 35 In laga wada xaajoodo
Magaca shayga Boorsada dahaaran ee gaarka ah ee gaarsiinta raashinka Mootada boorsada kuleylka ee gaarsiinta
Waxyaabaha 840D+PVC, Qalab kasta oo aan kuu qaban karno
Midab Cagaar, Jaalle Midabada kasta waa ok
Logo Kartoo, embossing, daabacaadda, ama logo saxan biraha iyo wixii la mid ah
Cabbirka Cabbir kasta waa la beddeli karaa Cabbir kasta waa la beddeli karaa
Muunad kharash Waxay kuxirantahay qaabka, naqshadeynta astaanta, maaddada iwm
Xidhmada 1 bac pc ah oo ku jira 1 bac poly, waxaan sidoo kale awoodnaa sida aad u baahan tahay
Cabbirka Buuxda Waqtiga Hoggaaminta Muunadda Sida caadiga ah 3-7 maalmood oo shaqo
Bixinta 1.waxaan aqbalnaa T/T, Paypal.2.Ugu badnaan 30% deebaaji ahaan iyo dheelitirka la bixiyay kahor dhoofinta
* * Tayada darajada ganacsiga: Boorsada dahaaran waxay ka samaysan tahay polyester culus oo aan jeexmi doonin ama xoqinayn, waxaa ku yaal dhabarka boorsada taageero qaro weyn leh si aadan uga welwelin cuntada ayaa dhabarkaaga kululayn doonta markaad fuushan tahay. Dahaarka gudaha ee dahaarka qaro weyn wuxuu cuntada ka dhigaa mid diirran/qabow waqtiyo macquul ah oo hubi inay ka hortagto daadinta.
* * Waasac: Haddii aad cunto ku keento baaskiilka/mootada boorsada kuleylku waa gacmaha hoos u dhig qiimaha ugu fiican. Kufiican gaarsiinta cuntada makhaayadda iyo daryeelayaasha xirfadleyda ah. Waxaad u adeegsan kartaa bacdayada cuntada si aad u samayso kaamam, barbeegyo, xaflado iyo dukaamaysiga.
* * Pizza dahaaran/Bacda Bixinta Cuntada ee Cuntada, Makhaayadda, Darawalada Bixinta iyo inbadan.
* * Boorsada kulul ee loogu talagalay gaadiidka cuntada, amarada, pizza, ama nooc kasta oo amar ah. Waxay ku habboon tahay adeegga gaarsiinta cuntada guriga, ee ku socda baaskiilka, mootada ama baabuurka.
* * Boorsada raashinka ee dahaarka leh ee dusha sare leh: Bacaha keenista cuntadu waxay leedahay muuqaal 840D polyester ah oo waara oo aan biyuhu lahayn oo bixiya adkaysi aad u fiican iyada oo loo marayo adeegsiyo culus iyo nadiifin. Boorsada gudbinta ee waarta ee dib loo isticmaali karo oo leh jiinyeer laba geesle ah, gacmo la xoojiyay, kor-u-qaadista & naqshadeynta jeebabka dhinac. Bacda gaarsiinta Pizza waxay isku laaban kartaa si siman, ilaa cabbir isku dhafan si loogu kaydiyo si fudud oo hoosta la xoojiyay si cimri dheeri ah loo helo. Ammaan u ah shaqada oo leh xarig ka tarjumaya hareeraha hore iyo dhinacyada bacda.
Hore: Bacaha kuleylka ah ee caadada ah ayaa leh boorso kuleyl leh oo dahaaran oo loogu talagalay gaarsiinta cuntada kulul
Xiga: Boorsada Custom 1680D dahaaran bacaha pizza cunto bixinta dahaaran bacda qaboojiyaha gaarsiinta cuntada qaboojiye boorsada
Boorsada Dambiisha ee Cuntada
Bixinta Cuntada Bacda
Bacda Bixinta Cuntada Mootada
Bacda Bixinta Biyuhu